एन आर एन ए यूके अध्यक्षका तीन प्रत्यासी लाई तीन प्रश्न - लण्डन काठमाडौँ
गैर आवासीय नेपालीहरुको संगठन गैर आवासीय नेपाली संघ युके (एनआरएन युके) को आगामी नवौं कार्य समितिको लागि ३१ जुलाई २०२१ मा सम्पन्न हुन गैरहेको निर्वाचनको लागि १९ जुलाईमा सम्पन्न उमेदवारहरुको मनोनयनसंगै चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । उमेदवारहरु आफ्नो जीत पक्का गर्न लागिपरेका छन। यसै क्रममा लण्डन काठमाण्डौले अध्यक्ष्यको तीनै उमेद्वारहरुलाइ तीन प्रश्न सोधेको थियो। लण्डन काठमाण्डौको प्रश्नमा उहाँहरुको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै:
प्रश्न १ : आसन्न एन आर एन ए यूके को चुनाबमा तपाइको उमेदवारी किन ?
गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको वर्तमान कार्यसमितिमा रहेर सकृय रुपमा काम गर्ने उपाध्यक्ष मध्ये म एक हु। विगत दुई वर्षमा संस्थाले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यन्वयन गर्न मैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । गत निर्वाचनमा हामील केही अजेण्डा सहित चुनावमा गएका थियौं । ती अजेण्डालाई बेलायतस्थित नेपाली समुदायले अनुमोदन गर्नु भयो । त्यसैका बीच विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको संक्रमण शुरु भयो । सबै ध्यान महामारीमा केन्द्रीत भएता पनि अधिंकॉस एजेण्डाहरुमा काम त गर्यौ तर केही अधुरा अझै छन । अधुरा कामहरुलाई सम्पन्न गर्दै आगामी दिनमा संस्थाको सम्पूर्ण ध्यान संस्थागत विकासमा हुनु पर्छ । त्यसका अतिरिक्तमा नेपाली समुदायमा रहेका भूपु गोर्खा, नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्तिको सुरक्षा, नेपालमा लगानी, एनआरएनएमा नयां पुस्ताको भविष्य, आर्थिक पारदर्शिता लगायतका मुख्य मुद्धा छन् ती मुद्धालाई मैले नजिकबाट बुझेकी छु । केही यसअघि अधुरा रहेका अजेण्डा र केही नयाँ अजेण्डामा केन्द्रीत रहेर काम गर्ने उदेश्यले गैरआवासी नेपाली संघ यूकेको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे ।
मेरो उम्मेद्वारी आर्थिक पारदर्शिताको लागि , बेलायतबासी नेपाली हरूको नेपाली नागरिगता निरन्तरताको लागि , स्थानिय जनताकोलागी बिशेष कल्याणकारी कोष तथा कार्यक्रम ल्याउनको लागि हो। स्थानिय लोकल काउन्सिल संग मिलेर नेपालीहरूको हक र हितको लागी काम गर्न , नेपालमा बेलायतबाट बिशेष परियोजनामा सामुहिक लगानी गराउन, नयॅा पिढिका युबा युबती हरूलाई एनआरएनए यूके मा ब्यापक सहभागी गराउन आकर्षक कार्यक्रम संचालन गर्न, नेपालको भाषा संस्किर्तिको जगेर्ना गर्न र नयॅा पिढिहरूलाई नेपाल संग जोडन पनि मेरो भगीरथ प्रयास रहने छ। एन आर एन ए एउटा बिसुद्ध गैर राजनितिक संस्था हुँदा हुँदै पनि यहाँ हरेक किसिमका राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ। संस्था लाइ सबैले अपनत्व गर्ने सबैको साझा संस्था बनाउन पनि म यो मैदानमा उभिएको छु।
म दुई कार्यकाल उपाध्यक्षका रुपमा समितिमा रहेर काम गरेँ । अब मेरो लागि अध्यक्ष बाहेक अर्को ठाउँ छैन । अध्यक्षमा मेरो दाबी स्वभाविक हो भनेर बुझ्नु राम्रो हुन्छ । अध्यक्ष भएर के गर्ने भन्ने कुरा यो सँगै आउँछ । मैले धेरै ठूला कुरा गरेको छैन । मुख्य ७ वटा अजेण्डा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छु । तपाईं लगायत बेलायतवासी नेपालीहरुले यसबारेमा जानकारी पाइसकेको हुनुपर्छ । मेरो मुख्य कुरा संस्थालाई पारदर्शी बनाउने नै हो । संस्थालाई पारदर्शी बनाउनकै लागि हामीले दुई वर्ष निरन्तर प्रयास गर्यौं । तर, नेतृत्वमा नभएकैले यसलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्न सकेनौं । एनआरएनलाई साँच्चै नै यसको उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा यसलाई स्थापित गर्नु पर्ने छ । नयाँ पुस्तालाई पनि संस्थामा सक्रिय रुपमा सहभागी गराउनुपर्र्ने छ । युवा पुस्तालाई नेपाली कला संस्कृति र भाषासँग जोड्दै मातृभूमिको सेवाभाव जगाउनुपर्ने छ । पूर्व गोर्खाहरुको समस्या पनि छन् । म आफैं पनि पूर्व गोर्खा भएकाले ती समस्याका बारेमा म राम्ररी जानकार छु । नेपाली नागरिकता निरन्तरताको मुद्दा छ । दोश्रो पुस्तापछिका नेपालीहरु नेपालसँग बिच्छेद हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । सम्पत्तिको अधिकारको सवाल पनि छ । महिला सहभागिताको कुरा छ । अब सहभागिताको कुरा मात्रै होइन, नेतृत्वको पनि कुरा छ । नेपाली समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ । यी काम म गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ । समुदायको अपेक्षा अनुसार काम गरेर नै संस्थाको विश्वास बढाउने हो । नेपाली समुदायको सुख दुःखको साथी एनआरएन हो । हरेक सदस्यले ‘मेरो एनआरएन’ छ भन्ने विश्वास जगाउने छु । मेरो आग्रह छ, यसपाली विश्वास गर्नुस्, तपाईंहरुलाई घात गर्ने छैन । मेरो धरालत नै यही समाज हो भने मैले कसरी आफ्नै धरालतलाई विश्वासघात गर्न सक्छु ?
प्रश्न २: बिगत एन आर एन ए अभियानमा तपाइको भूमिका के कस्तो रह्यो ? तपाइको अग्रसरतामा एन आर एन ए यूकेले के कस्तो उपलब्धि हाँसिल गरेको छ ?
प्रेम गाह मगर
झण्डै २६ वर्ष बेलायत बसाइका क्रममा म यहाँको नेपाली समुदायसँग राम्रोसँग घुलमिल भएको छु । एनआरएनको स्थापनादेखि हालसम्मका सबै गतिविधिहरुमा कुनै न कुनै रुपमा सहभागी छु । पछिल्लो दुई कार्यकाल म उपाध्यक्ष भएर काम गरेको छु । यसबीचमा के के गरियो भन्ने त स्पष्ट नै छ । सबै काम त भनेर संभव पनि छैन । केही कुरा बुँदागत रुपमा बताउन चाहन्छु । जब म २०१७÷१९ कार्यकालमा पहिलो पटक उपाध्यक्ष भएँ, मलाई च्यारिटी डिपार्टमेन्ट प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त भयो । जिम्मेवारी अनुसार काम त गर्नै पर्यो । मैले पहिलो नै निश्चित समय दिने छु भनेर वाचा गरेको थिएँ । समयले मात्रै भएन, आइडिया पनि चाहियो । मैले त्यतिबेला नेपाली कला संस्कृतिको प्रबद्र्धन र नेपाली कलाकारलाई प्लाटफर्र्म उपलब्ध गराउने भनेर भ्वाइस अफ नेपाल कन्सर्टको आयोजना गरेँ । मैले भनेको थिएँ, घाटा भए मेरो, फाइदा भए संस्थाको । नेपाली कलाकारहरुको व्यापक सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अपांगता भएका वृद्ध वृद्धा गोर्खाज र तिनका परिवारका सदस्यहरुको सहयोगका लागि डिजाबिलिटी एड कार्यक्रम ल्याएँ । यो कार्यक्रम पनि व्यापक सफल भयो । त्यस्तै च्यारिटी डिनर विथ बक्सिङ कार्यक्रम पनि गरियो । नेपाली र विदेशी बक्सरहरुको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । दोश्रो कार्यकालमा भने भने जिम्मेवारी फेरियो । मलाई गोर्खा डिपार्टमेन्ट प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । म आफैं पनि पूर्व गोर्खा सैनिक भएकाले मलाई यो जिम्मेवारी झनै उपयुक्त थियो । तपाईंलाई पनि थाहा छ, यहाँ पूर्व गोर्खाजको समस्या कति छन् कति । गोर्खाजहरुका पनि आ आफ्नै संगठन छन् । ती संगठनहरुलाई एकजुट बनाउँदै संयुक्त आवाज र पहल गर्नुपर्ने थियो । एक हदसम्म हामी यसमा सफल भयौं । गत अप्रिलमा हामीले एनआरएनकै ब्यानरमा बेलायती प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई तेह्र्र बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्र्न आग्रह गर्दै पत्राचार गर्यौ । हालैै बेलायती रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । हामी अब नेपाल सरकारको धारणाको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं । नेपालको वर्तमान र निवर्तमान दुवै सरकारसँग सम्पर्कमा रहेर गोर्खाजहरुका बारेमा पहल थाल्न आग्रह गरिरहेको छु । हाम्रो दोेश्रो कार्यकाल कोभिड महामारीको चपेटामा पर्यो । बेलायतवासी नेपालीहरु पनि महामारीमा नपर्ने कुरै भएन । केही दुःखद घटना पनि भयो । हामी कोभिडबाट परेको असर न्यूनीकरणमा लागिरह्यौं । बेलायतमा एउटा कुरा थियो, मातृभूमिमा पनि महामारीको प्रकोप उस्तै थियो । दोश्रो लहरमा त नेपाल निकै प्रभावित भयो । हामीले सहयोग संकलन गरेर विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण नेपाल पठाएका छौं । महामारीका कारण धेरै काम गर्न सकिएन होला, तर, हामी त्यसै बसेका छैनौं । कुनै न कुनै रुपमा हामी सक्रिय नै रहिरहेका छौं ।
२०१५-२०१७ मा म कोषाध्यक्षको भूमिकामा थिएँ र बिगत दुई बर्ष देखि इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदको अध्यक्ष को भुमिकामा छु। मेरो अग्रसरतामा एनआरएनए यू के लाई लागेको आरोप आर्थिक अनियमितता लीई चिर्न सफल रहि पारदर्शि बनाउन सफल रहें। नेपालमा एनआरएनए भवन बनाउन करोडौ रकम संकलन गरी पठाउन सफल, नेपालमा महा-भुकम्प जादा क्षतविक्षत पारेको लाप्राक बस्ती बनाउन एनआरएन केन्द्र मार्फत लाखौ रूपैया पठाउन सफल भएँ। हालै कोरोनाको महामारीमा बेलायत तथा नेपालमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोह गर्न आर्थिक संकलन संयोजकको भुमिका खेलेको छु। यो बाहेक पनि मेरो अग्रसरता निम्न कुराहरु भएका छन।
लण्डन को मुटु मानिने ट्राफलगर स्क्वायरमा बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन भनि भारतले फैलाईरहेको भ्रमलाई चिर्न र नेपालको पर्यटन प्रबधन गर्न , राजदुताबास लण्डन, नेपाल पर्यटन बोर्ड , कपिलवस्तु समाज यू के र बिभिन्न संघ संस्था हरू संग सहकार्य गर्दै बुद्ध फाउण्डेसन यू के को संस्थापक अध्यक्ष को हैसियतमा बुद्ध जयन्ती बनाउने कार्यक्रमको थालनी ।
नेपाल ले पहिलो पटक बेलायत मा अवसर पाएको MCC Vs Nepal क्रिकेट खेल मा आर्थिक तथा मार्केटिंग को सफल संयोजक को भुमिका
बेलायत- नेपालको २०० बर्षको सम्बन्ध पश्चात बेलायतको जनगणनामा नेपाली को पहिचान स्थापित हुन नसकेको अवश्थामा हालै सम्पन्न बेलायत को जनगणना २०२१ ( census 2021) मा इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद को तर्फ बाट मैले धेरै भन्दा धेरै नेपालीहरुलाई census मा भाग लिन लगाउने अभियान को नेतृत्व गरेको ।
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा सन् २००७ देखीनै सकृय हुदै आएकी छु । संघका प्रायः सबै कार्यक्रममा सहभागी र सकृयता देखाउदै आएकी छु । सकृयता र क्षमताको मुल्यांकन गर्दै वेलायतबासी नेपालीहरुले गतनिर्वाचनमा अत्याधिक लोकप्रिय मतले उपाध्यक्षमा जिताउनु भयो । उहाँहरुले दिएको विश्वासलाई डकमगाउन दिइन र सधैं संस्थाको हितमा उभिए । कोभिड १९ को महामारीमा समेत हामी सकृय भएर कोरोना पिडितको लागि सहयोगार्थ खटियौं । बेलायतमा रहेका ४ सय भन्दा बढी संघसंस्थाको संयोजनको जिम्मेवारी आफैले समाल्ने मौका पाए । त्यो जिम्मेवारीलाई सफलता पूर्वक पुरा गरे । अबको बांकी समय संस्थाको बृहत्तर हितमा खर्चिन योजना सहित चुनावी मैदानमा आएकी छु ।
मेरो अग्रसरता मात्र नभएर जति काम विगत दुई वर्षमा भए ति सबै सामूहिक प्रयासबाट भएका हुन् । हाम्रो कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएको केही महिनामानै कोरोना कारण बन्दाबन्दी मा परियो । संघका सम्पूर्ण गतिविधीहरु कोरोना पिडितको लागि सहयोगमा केन्द्रीत भयौ । यो बीचमा थुप्रै काम भएका छन् । नेपालमा अक्सिजना पठाऔं, आफन्तको ज्यान बचाऔं अभियानमा बेलायतस्थित नेपाल समुदायले गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेलाई विश्वास गरेर एकै रातमा करोड भन्दा बढीको आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्नु भयो । हामीलाई समुदायले देखाएको विश्वासले काम गर्न हौसला मिल्यो । पछि करिब साढे दुई करोड भन्दा बढीको सहयोग नेपाल पठाउन सफल भयौं । संस्थागत, परोपकार, भुपूगोर्खा नागरिकताको निरन्तरताको लागि लविङ, र वेलायतमा रहेका नेपालीहरुका समस्यालाई नेपाल सरकारसंग पुराउने उदेश्यले सरकारका मन्त्रीहरु लगायत उच्चपदाधिकारीहरु संग पटक पटक अन्तरक्रिया भए । कोभिडकै बिच महिला सशक्तिकरण को लागी अन्तराष्ट्रीय सेमिनारको नेतृत्व, कोभिड पीड़ित बिध्यार्थी हरूलाई सहयोग कार्यको संयोजन लगायत कामहरूमा मेरो नेतृत्वकैरी भूमिकाले समग्रमा यस कार्यकालमा परिभाषित ज़िम्मेवारी मा सफल भएको ठान्दै वेलायतबासी नेपालीको मन जित्न सफल भयो ।
प्रश्न ३ :तपाइको जीतको आधार के के हुन् ?
मैले बिगतमा नेपाल र नेपाली को लागी निश्वार्थ सेवा गरेका मुख्य मुख्य काम हरूनै मेरो जीतको प्रमुख आधार हो।
मैले बिभिन्न संघ संस्था मार्फत गरेका सबै योगदान को आधारमा मलाई बेलायत बासी नेपाली हरूले मतदान गर्नु हुनेछ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।यसका साथै मलाई तमु धिं यूके, पासा पुच गुठी , क्षेत्री समाज, वेलसायर नेपलीज कम्युनिटी,बेलेक्सी नेपाली कम्युनिटी,आरजीएनएस, तमु धिं साउथइस्ट, डार्टफोर्ड नेपाली कम्युनिटी लगायत बेलायत स्थित बिभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोग र समर्थन छ। एनआरएनए युके को संरक्षक मण्डलको बहुमत सदस्य हरूको सहयोग समर्थन पनि म संग छ।
मतदान गर्नु अधि अध्यक्ष का प्रत्याशी हरूले समाजलाई दिएको समय र योगदान तथा भविष्य मा संघ लाई निश्वार्थ सेवा गरी संघ लाई पारदर्शि, सम्मानित र सांगठनिक बनाउन सक्ने उम्मेदवार लाई बिजयी बनाउनुहुनेछ भन्ने कुरा मा बिश्वस्त छु ।
मैले भनिरहेको छु कि अबको हाम्रो पहिलो प्रयास संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने नै हो । लेखा प्रणालीलाई चुस्त बनाउने नै हो । संस्था कसरी चलिरहेको र के भइरहेको छ भन्ने बारेमा आम सदस्यहरुलाई खुला रुपमा देखाउन सकियो भने सबैको विश्वास जागिहाल्छ । हामीले जुन प्रयास गरेका छौं, त्यसले पनि देखाउँछ कि अब कसैले पनि अनियमितता गर्ने दुष्प्रयास गर्ने छैन । म जुन अभियान लिएर अगाडि बढिरहेको छु, नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छु । विगतमा कोही कसैले बदमासी गर्यो भनेर हामी पनि त्यही बाटोमा लाग्ने कुरै आउँदैन । हामीले त विगतका कमजोरी पनि सच्याउने हो । म आग्रह गर्छु, संस्थाको उद्देश्य र सदस्यहरुको चाहना विपरीत आगामी कार्य समितिलाई जान दिने छैन । मेरा हरेक काम पारदर्शी हुने छन् र सामूहिक निर्णयका आधारमा हुने छन् । कार्य समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई जवाफदेही बनाउने छु । प्रश्न सोध्ने र उत्तर खोज्ने प्रणालीको विकास गर्ने छु । अनि मेरो उम्मेदवारी समाजलाई जोड्न हो, तोड्न होइन । विभिन्न कारणले उत्पन्न निराशा हटाउन हो, निराशा बढाउन होइन । एनआरएनप्रतिको विश्वास जगाउन हो, भड्काउन होइन । मेरो कार्यशैली, विगतमा गरेका काम र आगामी कार्यकालका लागि मैले अघि सारेका अजेण्डामा अधिकांश पन्जीकृत सदस्यहरुले सहमति जनाएका छन् । यत्ति मात्रै होइन, निराशाका बीच पनि मेम्बरशिप ड्राइभका क्रममा मैले जति जनालाई भेटेँ, उहाँहरु सबैले शुभेच्छा प्रकट गर्नु भएको छ । मेरो जितको आधारमा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ, जो संस्थालाई माया गर्दै सदस्यता लिनु भएको छ । सदस्यहरुले संस्था बलियो बनाउने हो, नेतृत्वले सदस्यहरुमा विश्वास जगाउने हो । अहिले ११ हजार तीन सयको हाराहारीमा पन्जीकृत सदस्यता लिनु भएको छ । अधिकांश सदस्यहरुसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट म जोडिएको छु । उहाँहरुको अजेण्डा र चाहनालाई मैले उठाएको छु । एनआरएनएको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने छु । यो सँगै अधिकांश एनआरएनए अभियन्ताहरु, समाजका अगुवाहरु, सामाजिक संस्थाका प्रमुखहरुको पनि शुभकामना पाएको छु । विगत दुई कार्यकाल निरन्तर संस्थामा रहेर काम र आगामी कार्यकालका लागि उठाएका मुद्दामा जुन समर्थन देखिएको छ, जितको पहिलो र प्रमुख आधार यही हो । शक्तिको श्रोत सदस्यहरु नै हुन् । सदस्यहरुको मन जितिसकेको छु भन्ने लागेको छ । अब मतको प्रतीक्षा गरिरहेको छु । मलाई विश्वास छ, विगतमा जस्तै साथ, सहयोग, माया र विश्वास यस पटक पनि प्राप्त गर्ने छु ।
मुख्यआधार भनेको नेपाली समुदायले विगतमा दिनमा म प्रति गरेको विश्वास हो । गत निर्वाचनमा उहाँहरुले दिनुभएको विश्वासलाई मर्न नदिएर संस्थाको हितको लागि काम गरेर सिद्ध गरेकीछु । त्यसको यसपटक पनि अवश्य मुल्यांकन हुने छ । म आफै भूपुगोर्खा परिवारको व्यक्ति भएको हुनाले यहाँस्थित भूपुगोर्खा संघसँस्थाको समेत म प्रति ठूलो सदभाव रहेको छ । म संस्थापन पक्षका समग्र मुद्धाहरूमा उभिने एक मात्र उपाध्यक्ष हु त्यसैले संस्थाका अग्रज देखी नयां पुस्ता सम्मको मन जित्न प्रत्यन गर्दैछु । वर्तमान अध्यक्ष पुनम गुरुङ्गले पहिलो पटक महिला अध्यक्ष भएर आफ्नो नेतृत्वलाई अब्बल सावित गर्नु भएको छ । त्यसले मलाई हौसला मिलेको छ । संघका संस्था विभागको संयोजकको रुपमा काम गर्दा बेलायतस्थित सबै संघसंस्थासंग काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे । उहाँहरुको आर्शिवाद र हौसलाले उम्मेदवारी दिएकी छु ।
सुरु भयो मौन अवधि, के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ?
कार्यकाल दोहोर्‍याउने दाउमा रेनु दाहाल
भरतपुरमा विद्रोहको झण्डा नछाडेका जगन्नाथ पौडेल